Ireo no telefaona misy Android One atolotra ao amin'ny MWC 2018 | Androidsis
Mitady telefaona misy Android One? Ireo no efa natolotra tao amin'ny MWC 2018
Eder Ferreño | | Finday, MWC, Android Version
Android One dia iray amin'ireo tetikasan'i Google hampiroborobo ny fampiasana ny rafitra fiasa. Izy io dia kinova amin'ny rafitra fiasa tsy misy bloatware sy sosona fanaingoana. Ny marika toa an'i Nokia dia mampiasa azy io. Na telefaona toy ny Xiaomi Mi A1. Ankehitriny, nandritra ity MWC 2018 ity dia nampiana telefaona vaovao ao amin'ilay programa. Avy amin'izay hitantsika ny fomba hanitaran'ny Android One.
Marika maro kokoa no te hiloka amin'ny telefaona tsy misy sosona manokana. Ary amin'ity fiandohan'ny MWC 2018 ity dia naseho ny sasany amin'ireo telefaona vaovao izay hampiasa ity kinova ity ny rafitra fandidiana.
Noho izany, Tsara ny mampiseho amin'ny lisitra ireo modely vaovao rehetra izay hampiasa Android One. Araka izany, ny mpampiasa dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo telefaona ireo izay hamely ny tsena amin'ny volana ho avy. Mety raha mitady telefaona tsy misy tadim-panaingoana ianao.
4 Telefaona Android iray hafa
Iray amin'ireo sainam-pirenena vaovao marika, natolotra omaly. Telefaona iray izay anomezan'ny marika marika ny tantarany sy mijery ny ho avy. Miatrika ny iray amin'ireo fitaovana feno indrindra natomboky ny marika eo amin'ny tsena izahay. Inona koa, toy ny mahazatra ao amin'ny Nokia dia mampiasa Android One izy io. Ka afaka manantena fanavaozana haingana foana isika.
Faharoa ny telefaona vaovao an'ny marika. Izy io dia fitaovana iray izay manana ny zava-drehetra handresy ireo mpampiasa. Manomboka amin'ny endrika maoderina tena hatramin'ny famaritana tsara. Ankoatr'izay, ny fampiasana Android One dia manome antoka ihany koa fa hanavao haingana kokoa ianao. A koa fitomboan'ny fisian'ny Google Assistant amin'ny fitaovana. Ka ny mpampiasa dia hanana ny tombony rehetra.
Amin'ny laharana fahatelo dia ny eo afovoan'ny marika. Telefaona iray izay mahatratra ny tsena amin'ny sehatra sarotra nefa ny marika no anaovany azy tsara. Ka azo antoka fa tena tian'ny mpampiasa izy io. Finday iray miloka amin'ny famolavolana sy a processeur kalitao toy ny Snapdragon 630. Safidy tsara ho an'ireo maniry telefaona misy Android One izay mora vidy kokoa.
Telefaona Android iray hafa
Ireo telo ireo no vao haingana indrindra izay tafiditra ao amin'ny fianakaviana Android One. na dia misy finday hafa koa misy ankehitriny. Hitanay àry ny fomba fitomboan'ny fianakaviana. Mahita modely toa ny Xiaomi Mi A1, ny HTC U11 Life na ny Moto X4 eo amin'izy ireo isika.
Hitantsika koa maodely maranitra vitsivitsy ao anaty lisitra. Ankoatra an'i Motorola. Amin'ny zavatra hitantsika fa misy karazany maro ao anatin'ny Android One. Mety hahalala telefaona bebe kokoa isika afaka andro vitsivitsy. noho izany hanavao ny lisitra izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Mitady telefaona misy Android One? Ireo no efa natolotra tao amin'ny MWC 2018
Leagoo dia manolotra ao amin'ny MWC ny Leagoo S9, ny klone voalohany amin'ny iPhone X sy ny Leagoo Power 5 miaraka amin'ny bateria 7.000 mAh